Fetim-pirenena :: Handray ny Matso lehibe ny kianjan’i Mahamasina • AoRaha
Hosantarin’ny Matso hataon’ny Foloalindahy malagasy ny fisokafan’ny kianjan’i Mahamasina amin’ ny endriny nohavaozina na ny kianja Barea mandritra ny fankalazana ny Fetim-pirenena sy ny fetin’ny foloalindahy amin’ny 26 jona 2021. Mamaramparana ny asa rehetra hahafahana mandray ny lanonana miaramila eny an-toerana ny ekipan’ny Fiadidiana ny Repoblika.
«Vita ny lalana manodidina ny kianja hampiasain’ny mpanao matso. Kely sisa dia ho tafapetraka avokoa ireo seza rehetra. Ny tamboho sy ireo fotodrafitrasa ivelany ihany koa no hofaranana daholo mialoha an’io fotoana io mba hahafahana mandray ny matso”, hoy Andriamanohisoa Gérard, Mpandrindra ny tetikasa « IEM » eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Mivonona amin’ny lanonana miaramila, araka izany, ry zareo fianakaviamben’ny Foloalindahy sy ny Fiadidiana ny Repoblika. Hotontosaina ao anatin’ny fanajana an’ireo fepetra ara-pahasalamana kosa ny hetsika, araka ny fanampim-panazavan’Andriamanohisoa Gérard izay sady miandraikitra manokana ny fanamboarana ny kianja Barea, etsy Mahamasina.
Seza mielanelana iray metatra
Nampiany fa noelanelanina iray metatra avokoa ireo seza ireo mba hahafahana miantoka an’izany fampanajàna ny fepetra ara-pahasalamana hisorohana ny valanaretina izany. Hatrehin’ny Filohan’ ny Repoblika, Rajoelina Andry io lanonana eny Mahamasina io.
Vinavinain’ny Fanjakana hotokanana amin’ny volana septambra any ho any kosa ny fahavitan’ny kianja Barea. Kendrena ny hahafahana mandray an’ireo lalaon’ny ekipam-pirenen’i Madagasikara taranja baolina kitra mandritra ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany, hatao any Katara amin’ny taona 2022. Omanina rahateo ny bozaka vaovao hapetraka amin’ny kianja.
Momba ny matso amin’ ny 26 jona manokana dia eo am-panomanana tanteraka ny Foloalindahy ankehitriny. Hisy ireo miaramila vahiny vitsivitsy handray anjara amin’ izany raha tsy misy ny fiovana.
Hafatra manoloana ny fanakianana Valian’ny Filoha amin’ny asa ireo mpanenjika azy
Fitaizana sembana Nosantarina tany Antsiranana ny fananganana ny « Akany Fitiavana »
Fampandrosoana isam-paritra Hoesorina ireo governora tsy mamokatra
Ady amin’n y kolikoly :: Hitsara raharaha dimy samihafa ny PAC
Fampanaraham-penitra lalam-baovao :: Hoesorina ireo tsena kely mitady hiorina eny amin’ny “Rocade Est”
Fahitana razana tany Ambositra Vehivavy tadiavina mafy tamin’ ny fanolanana sy fahafatesan-jaza
Baolina kitra – « Mondial 2022 » Miha maizina ny lalan’ny Barean’i Madagasikara
Fifamaliana tao anaty fiara Mpamily taksibe sy ny mpanampy azy nandratra mpandeha